Madaxweynaha Somaliland oo Warbaahinta Online-ka ah (Websites) ku bogaadiyey Doorka ay ka qaateen Doorashooyinka. |
Madaxweynaha Somaliland oo Warbaahinta Online-ka ah (Websites) ku bogaadiyey Doorka ay ka qaateen Doorashooyinka.
Hargeisa(GNN):- Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa warbaahinta kala duwan ee dalka ku ammaanay doorkii ay ka qaateen Doorashooyinkii Isku-sidkanaa ee Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiillada oo dalka ka qabsoomay 31-kii May 2021-kii.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta madaxtooyada ku qaabilay Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo uu uga mahad-celiyey sida hufnaanta leh ee ay u agaasimeen qabsoomidda Doorashooyinka, waxa uu warbaahinta dalka gaar ahaan Mareegaha Wararka (Websites) iyo Telefishannada ku ammaanay doorkii ay qaateen wacyi-gelinta iyo baahinta wararka togan ee ku saabsan arrimaha Doorashooyinka Dalka oo uu sheegay inay ka qaateen qayb laxaad leh oo wax-qabadkooda la dareemay.
“Warbaahinta madaxa-bannaan waxay u shaqeeyaan si waddaniyadeed; hadday Tv-yo yihiin, hadday website-yo yihiin, qof kasta waxbuu ka geystay wacyigelinta. Waa markii u horeysay ee wacyi-gelinteennu midowday, waa markii u horeysya ee loo wada adeegay sidii doorashadu u qabsoomi lahayd, hadday tahay kuwii Qaranku hayey iyo kuwii gaarka loo lahaaba,” Sidaas ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi.
Mareegaha Wararka ee ka hawl-gala Somaliland oo ku midaysan Ururka Warbaahinta Online-ka ah ee SOMA, ayaa Guddiga Doorashooyinka Qaranka kala shaqeeyay gudbinta farriimaha wacyi-gelinta iyo wararka ku saabsan arrimaha Doorashooyinka oo ay si joogto ah u baahin jireen.
Warbaahinta Onlineka ah (Websites-ka), waxa ay kaalin mug leh ugu jiraan horumarinta Dhaqan-dhaqaale, Dimuqraadiyadeed iyo siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana lagu tilmaamaa inay yihiin wejiga muraayadeed ee dunida ka dheehato xaaladaha kala duwan ee gudaha Somaliland ka jira.
Dhinaca kale, waxa uu madaxweyne Muuse Biixi xubnaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka ku ammaanay qaabka ay u agaasimeen qabsoomidda Doorashooyinka iska Sidkan ee Goleyaasha Deegaanka iyo Wakilllada, waxaanu si gaar ah ugu ammaanay inay hirgeliyeen nidaam ku cusub hannaanka qabsoomidda doorashooyinka dalka oo aan hore u jirin, kaas oo uu ku tilmaamay inuu meesha ka saaray cabashooyin iyo tuhunno ku yimaadda natiijada doorashooyinka.
Sidoo kale, waxa uu madaxweynuhu bogaadiyey hawl-wadeennadii loo xil-saaray hawsha doorashooyinka oo badankooda laga soo dhex-xushay Ardayda Jaamacadaha dalka, kuwaas oo uu tilmaamay inay muujiyeen hufnaan iyo karti ay ku guteen hawsha qaran ee loo xil-saaray.
Somaliland iyo Itoobiya oo iska kaashanaya Xakamaynta Dagaal Ganacsi oo…
Madaxwayne Mustafe ayaa xadhiga ka jarey suuqa cusub oo loo…
Badhasaabka G/Sool oo kormeeray Taliska qaybta Booliska gobolka iyo Saldhiga…
Qaar kamida Ururada Ka shaqeeya Arimaha Samafalka oo shir ku…